Mampidira fampiharana tsotra hanovana horonantsary | Famoronana an-tserasera
Mampidira fampiharana tsotra hanovana horonan-tsary
Fotoana vitsy lasa izay dia nokaramaina aho hanao poster amin'ny dokam-barotra ho an'ny orinasa natokana ho an'izao tontolo izao amin'ny alina, ary tsy maintsy nanao ihany koa aho horonantsary fampiroboroboana isan-kerinandro ho an'ny tantara Instagram.
Avy eo dia nanana olana lehibe tamin'ny fanovana horonantsary aho, satria nila nanao azy ireo tamin'ny habe manokana aho, ary ho mora sy haingana.
Rehefa avy nikaroka sy nanontany ary namaky be dia be aho, sendra nahita izany Inshot, fampiharana fanovana horonantsary maimaimpoana izay nanolotra ahy ny zavatra rehetra ilaiko.
Ny tsara indrindra dia mora ny mampiasa fampiharana. Manome antsika safidy telo ho an'ny fanovana, horonan-tsary, sary ary collage izahay. Izaho dia mampiasa azy io foana amin'ny fanitsiana horonan-tsary.
Misafidy ny horonan-tsary na horonan-tsary tianay hanovana. Azontsika atao ihany koa ny misafidy andiana sary na gifs ho an'ny montage video.
Ao amin'ny safidy "CANVAS" misafidy ny endrika izay tiantsika hampiasaina. Ho fanampin'izay, ny fampiharana mitovy dia manome antsika ny fandrefesana ny Facebook, Instagram, Youtube, sns. Izy io koa dia manome antsika ny safidy ny fanaovana ny horonantsary ho kely kokoa ary tsy hipetrahana ny lamba canvas iray manontolo, tiako be izany satria izany no nametrahako ny fotsy fotsy ary namboarina izy.
Azontsika atao ihany koa ny misafidy loko ambadika ho an'ny tetikasanay.
Misafidy ny faharetan'ny lahatsarinay izahay, izany hoe, azontsika atao ny hanafohezana azy ireo ary hisafidy ny fomba tetezamita eo amin'izy ireo, satria manome antsika safidy samihafa.
Afaka manampy karazana sivana sy vokatra maro karazana izahay amin'ny tetikasanay, ary koa afaka mampiditra lahatsoratra sy sticker.
Finalmente mifidy ny mozika izahay izay tena tiantsika indrindra. Ny fampiharana mitovy dia manome antsika mozika isan-karazany, saingy afaka manampy ny mozika tadiavinay ao amin'ny tranomboky.
Tsy mila manondrana sy mankafy ny tetikasanay fotsiny izahay izao.
Ny marina dia tsotra be izy io. Toy ny mahazatra dia hametaka horonan-tsary aho ahafahanao mahita ny fomba fanovako video mora foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Mampidira fampiharana tsotra hanovana horonan-tsary
Ny MacBook Pro vaovao an'i Apple dia ho lafo kokoa, fa kosa ho avy amin'ny efijery lehibe kokoa
Tokyo 2020 dia nanambara ny medaly hoentin'ireo mpandresy volamena, volafotsy ary varahina